दोस्रो बच्चाको आमा बन्दै करिना, शेयर गरिन् यस्तो तस्वीर - NepalTrending
NepalTrending — January 25, 2021 add comment
एजेन्सी । चर्चित बलिउड अभिनेत्री करिना कपूर दोस्रोपटक आमा बन्ने भएकी छन् । करिनाले आफू दोस्रो पटक आमा बन्न लागेको पुष्टि गर्दैै इंस्टाग्राममा केही तस्वीर राखेकी छन् । तस्वीरमा उनी योगा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । तस्वीरमा उनी गर्भवती भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
सैफ अली खानसँग विवाह गरेकी करिनाको एउटा छोरा यसअघि नै रहेको छ । करिना र सैफको छोराको नाम तैमुर अली खान हो । तैमूर अहिले ४ वर्षक भए । सैफ र करिना हालै नयाँ घरमा सरेका छन् । पहिलाको घर सानो भएको भन्दै उनीहरु नयाँ घरमा सरेका छन् । उनले नयाँ घरको तस्वीर पनि इंस्टाग्राम सेयर गरेकी थिइन् ।
असल ईमान्दार लोग्ने को खोजीमा छु ! अनि….कोही छ ?
अघोरी बाबाको अभिनय संगै सुमनको शब्द,संगित र र्यापमा शिबरात्री गित “जय शम्भो” सार्वजनिक (भिडियो सहित)